Donald Trump "Shiinuhu waxay doonayaan in aan ku guul darreysto doorashada soo socota"
Mogadishu - 02:07:14
Friday May 01, 2020 - 00:01:47 in Wararka by Super Admin
Madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in Coronavirus uu yahay mu’aamarad ay soo maleegeen Shiinaha oo doonaya in uu ku guul darreysto doorashada madaxtinimo ee Mareykanka ee la qaban doono bisha November.
"Shiinuhu waxay isku dayayaan in ay sameeyaan wax alla iyo wixii karaankooda ah si aan ugu guuldarreysto doorashada Mareykanka ee soo socota" ayuu yiri Trump oo la hadlayay Reuters.
Trump waxa uu Shiinaha ku eedeeyay in ay mas’uul ka tahay dhibaatada COVID-19 oo ku faafay dhammaan dalalka caalamka, kaas oo uu sheegay inuu ka billowday magaallada Wuhan, isagoo xusay in haddii si daah furan ay caalamka ula shaqeyn lahaayeen la xakameyn karay cudurkan.
Madaxweyne Trump wuxuu sheegay in ay haatan baarayaan arrinta caabuqa Coronavirus bal in lagu sameeyay sheybaar ku yaalla Shiinaha iyo iyo in kale.
Cudurka Coronavirus ayaa Mareykanka ku dilay dad ka badan 60,000 oo qofood labadii bilood ee la soo dhaafay, taasoo ka badan guud ahaan intii Mareykanka kaga dhimatay dagaalkii Vietnam ee socday 20-ka sanadood (1955-1975).